Chishanu, Kukadzi 12, 2016 Local time: 19:58
All RSS FeedsAll zones: Links for all zonesSubscribeArchive ArchiveSubscribeInfographics InfographicsSubscribeNhau Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to dSubscribeAfrica Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to dSubscribeUSA Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to dSubscribePasi Rose Pasi RoseSubscribeMatongerwo eNyika Zvematongerwo EnyikaSubscribeKodzero-dzevanhu Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to dSubscribeVanhukadzi VanhukadziSubscribeSangano-revanhu Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to dSubscribeMari-nehupfumi Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to dSubscribeDzidzo Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to dSubscribeChikafu-nekurima Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to dSubscribeVechidiki VechidikiSubscribeHutano Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to dSubscribeMitambo Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to dSubscribeNhau dzeShona Shona-language news about Zimbabwe, The Voice of America is one of the world's most trusted sources for news and information from the United States and around the world. VOA is a multi media news organization using radio, television, and the internet to dSubscribeStudio 7 Studio 7 for Zimbabwe SubscribeLiveTalk Zimbabweans living outside the country who cannot receive our broadcast signals can now listen to and participate in LiveTalk in real time. Click on the link below to listen to the LiveTalk program in progress (8:30-9:00 p.m. Zimbabwe time (1830-1900 UTC)SubscribeZimOne Mobile ZimOne MobileSubscribeVhidhiyo VHIDHIYOSubscribeLiveTalk TV LiveTalk TVSubscribeVOA60 Africa VOA60 Africa is a one-minute wrap of the past 24 hours' news and video from the African continent. It includes politics, weather, arts, culture and the extraordinary events that lead the headlines. Share and be informed - VOA60.SubscribeVhidhiyo Yekuona Featured videos on various topics.SubscribeYali Zimbabwe Fellowship Yali Zimbabwe FellowshipSubscribeYali African Fellowship Yali African FellowshipSubscribeGungano Guru Reunited Nations Rechimakumi Manomwe Gungano Guru Reunited Nations Rechimakumi ManomweSubscribeMamiriro ezvinhu munyika Mamiriro ezvinhu munyikaSubscribeGrace Mugabe Grace MugabeSubscribeChina President visit to ZImbabwe Rwendo rwemutungamiri weChina, VaXi Jinping, kuZimbabwe, huri kutsanangudzwa nevamwe kwete senhoroondo yakakosha chete, asi sechiratidzo chekubudirira kwegwara reZimbabwe mukudyidzana kwayo nenyika dzekumabvazuva. Rwendo rwaVa Xi rwunoitika apo hukama hweSubscribe